Mahajanga: Zazavavikely 03 taona naolan'ny sipan'ny reniny
jeudi, 07 septembre 2017 19:13
Sipan'ny reniny ihany no nanampatra ny habibiany tamin'ity zazavavikeky vao 03 taona monja ity, ny 01 septambra lasa teo.
Teny an-dalana hihazo an'i Mahajanga no nanamparany ny filany raha iny nijanona teny Ambovondramanesy iny ny fiara nitondra azy ireo.
Tsy salama ny renin'ilay zaza, izay nipetraka teo amin'ny seza anoloan'ilay fiara, ka ilay rangahy no nitondra ilay zaza nivalan-drano ary tany no nanararaotany nanolana ilay zaza, izay nentiny niaraka lavitra mihitsy.
Tsy nisy nahatsikaritra ny zava-nisy raha tsy ny alin'io efa tonga taty Mahajanga vao nitaraina tamin'ny reniny ilay zaza fa misy marary ao amin'ny fivaviany. Nanomboka tamin'io no tsy hita ilay rangahy ary mbola karohin'ny mpitandro ny filaminana.
Fianakaviana sahirana ity niharan'ny fanararaotana ity ka tsy nahalala ny toerana tokony hanatonany, hany ka omaly vao nahazo fitsaboana sy fandraisana an-tanana eny amin'ny Centre Vonjy eny amin'ny hopitalibe Androva ilay zaza.
[url=http://edpharmacybest.com/]best online pharmacy for cialis[/url]
samedi, 09 décembre 2017 17:29
green flag car insurance auto insurance rates state
[url=http://autocarins2018.com/get-quote-auto-insurance/]auto insurance in oklahoma[/url]
vendredi, 08 décembre 2017 18:30
canadian drug .com prescription codes
mercredi, 06 décembre 2017 02:27
how much is insurance for a rental car auto owners insurance quote
[url=http://autocarins2018.com/reliable-car-insurance/]car insurance orlando[/url]
mardi, 05 décembre 2017 03:31
jeudi, 30 novembre 2017 03:58
Acheter Cialis 20mg Ligne Propecia Sildenafil Acheter Cialis Ligne Canada [url=http://cheapvia50mg.com]viagra[/url] Viagra A Casa Baclofene Mylan Pharmacy4you
mercredi, 29 novembre 2017 12:22
samedi, 25 novembre 2017 22:21
samedi, 25 novembre 2017 00:02
samedi, 18 novembre 2017 22:04
samedi, 18 novembre 2017 12:55